Hoover H-Purifier 700, famerenana ity fanadiovan-drivotra lehibe | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 05/06/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 27/05/2021 21:24 | General, hevitra
Ny fanadiovan-drivotra dia vokatra iray izay nanjary nalaza kokoa, indrindra amin'izao fotoana izao raha ny vovobony dia lasa fahavalon'ny olom-pirenena tsy mahazaka olona. Toy izany koa no mitranga rehefa miresaka momba ny tanàna lehibe isika, izay ahafahan'ny fahalotoana mamokatra haavon'ny gazy ao an-trano izay tsy mety amin'ny fiainana andavanandro ary mety hiteraka aretina.
Vao haingana izahay no namakafaka ireo safidy hafa ao amin'ny Actualidad Gadget, ary anio mitondra ny Hoover H-Purifier 700, fanadiovan-drivotra manana habe lehibe ary misy ny hamandoana ankoatry ny tombony hafa. Jereo miaraka aminay ny zava-nisongadiny, ary mazava ho azy koa ny fahalemeny.
2 Toetra ara-teknika sy sivana
3 Fampiasana sy maody
4 Fanampiny sy hevitry ny tonian-dahatsoratra
Hoover dia orinasa nentim-paharazana, izay ho tadidinao noho ny fahombiazany lehibe tamin'ny mpanadio banga taloha. Amin'izao fotoana izao ny vokatra isan-karazany dia nohavaozina be, anisan'izany no ahitantsika ny H-Purifier, manadio rivotra mitsangana sy mahitsy-cylindrika mahaliana. Ny faritra ambany dia ho an'ny grill suction filter amin'ny loko volafotsy, satria plastika. Toy izany koa no mitranga amin'ny tapany ambony, plastika fotsy izay ahitantsika tahony roa azo esorina amin'ny fitaterana, ny antsipirian'ny fandidiana sy ny faritra ambony, izay misy ny majia.
Loko: Volafotsy / Volafotsy + Fotsy
lanja: 9,6 Kg
Ity faritra ambony ity dia misy grille fivoahan'ny rivotra madio ary tontonana fanaraha-maso misy tariby LED izay hanondro ny toerana. Manana fampiasa isan-karazany amin'ity tontonana mikasika ity izay horesahintsika avy eo. Ny tapany aoriana dia tavela miaraka amin'ny vinavina sy ny fonon'ny sivana. Rehefa manala azy, hahita rafitra fanangonana tariby izay ankasitrahana ihany koa izahay, na dia eny aza, tsy nahita tariby lehibe kokoa izahay noho ny fiheverana ny karazana vokatra ifandraisanay. Satria manana kodiarana mandeha ho azy dia tsy azo soloina tariby lava kokoa ny tariby.
Toetra ara-teknika sy sivana
Ity Hoover H-Purifier 700 ity dia misy fifandraisana WiFi sy Bluetooth amin'ny fomba natambatra hampiasana amin'ny alàlan'ny fampiharana, zavatra izay mahazendana noho ny fahaizany miovaova. Izy io koa dia manana sensor sensor ho an'ny tahan'ny karbônôzenina avo lenta, ary koa sensor ho an'ny mari-pana sy hamandoana, zavatra ankasitrahana raha jerena ny toerana misy ny vokatra sy ny maha-zava-dehibe an'io karazana data io amin'ny fampiasana isan'andro. Etsy ankilany, manana sensor partikel 2,5 sy 10 nm koa izahay. Manokana, Heveriko fa efa ampy izay manana PM 2,5.
Vidiny sivana: 59 euro
Any an-tampony isika dia manana ny fampirantiana izay hampahafantatra antsika ny kalitaon'ny rivotra amin'ny fotoana tena izy. Manana fanairana momba ny fikojakojana ny sivana izahay, izay hodinihinay eto ambany. Manana filtration telo miaraka amin'ny sivana ivelany azo sasana izahay, sivana Hera H13 ary sivana karbaona mavitrika izany dia hahafahantsika miroso amin'ny tsy fampiatoana ny vovobony, indrindra ny mahaliana ireo mararin'ny allergy. Noho izany, ity fitaovana ity dia mety amin'ny teôtika hatramin'ny 110 metatra, notsapainay tamin'ny habaka 55 metatra toradroa teo ho eo izany. Manana fanafoanana ny VOC izy ary 330 ny metatra toratelo voadio isan'ora. manala ny 99,97% ny sombiny tsara.
Fampiasana sy maody
Ny Hoover H-Purifier 700, azonao vidiana amin'ny Amazon, Izy io dia manana maody fototra telo: Night, Auto ary Maximum, izay hapetraka amin'ny alàlan'ny tontonana touch and amin'ny alàlan'ny application. Na izany aza, Hanana «moisturizer» sy «diffuser» hanitra koa isika, izay afaka mifameno amin'ireo vokatra tafiditra ao anaty fonosana. Izy io dia fanampiny mahaliana ny hamandoana izay tsy dia misy loatra amin'ireo mpanadio rivotra avo lenta, noho izany dia fanampiny.
Sintomy ny fampiharana Hoover taloha
Sintomy ny fampiharana Hoover vaovao
Ho an'ny ampahany, amin'ny alàlan'ny fampiharana azontsika atao ny manamboatra ny H-Purifier hampiasa azy io amin'ny alàlan'ny mpanampy virtoaly roa tena malaza, miresaka momba izany izahay Amazon's Alexa sy Google Assistant. Amin'ireo tranga roa ireo dia hampidirina ao amin'ny lisitry ny fitaovantsika izy io ary hahafahantsika mamadika sy mamono ny fitaovana araka ny itiavany azy, ary koa manomana ny fandaharana mihoatra ny fampiharana nomen'i Hoover tenany. Azo hatsaraina ny rindranasa, misy interface misy azy io izay mampahatsiahy antsika vokatra maro hafa miavaka amin'ny fiaviana aziatika, kanefa, manatanteraka izay nampanantenainy izy.
Fanampiny sy hevitry ny tonian-dahatsoratra
Manana ny H-Purifier 700 ny H-Essence isika, izay andiana tavoahangy kely misy menaka manitra izay hapetraka mivantana, miaraka amin'ny tavoahangy ao anaty dispenser. Midika izany fa amin'ny teôria dia tsy afaka mampiasa afa-tsy menaka manitra Hoover isika satria tafiditra ao amin'ilay fitaovana ilay tavoahangy. Na izany aza, ny zava-misy dia afaka mameno an'ity tavoahangy ity ianao raha maniry menaka manitra avy amin'ny antoko fahatelo, zavatra amporisihiko hitahiry vola. Tsy izany no izy amin'ny sivana, izay toa tompony tanteraka, saingy tsy manoro hevitra ny fikororohana izahay, indrindra amin'ity tranga ity satria mora ny vidiny raha oharina amin'ireo mpifaninana eny an-tsena. Manana H-Biotics koa isika, karazana singa mamono otrikaretina sy probiotika izay ampidirina ao anaty dispenser.
Ny fikorianan'ny rivotra dia 360º, na izany aza, ny sensor dia nanome naoty kely hafa noho ny vokatra hafa avo lenta. Ny fantson-drivotra voadio dia toa tsy matanjaka loatra araka ny antenaina amin'ny vokatra mampanantena hatramin'ny 300 metatra toratelo isan'ora, ho fanampin'izany, hanimba tanteraka ny fahanginana izany, izay ekena amin'ny hafainganam-pandeha ambany, fa amin'ny maody alina kosa dia tsy araka ny nantenaiko. Ho an'ireo olona sahirana matory tabataba dia mila hovonoina ny H-Purifier. Izany no zavatra niainantsika tamin'ny H-Purifier 700.
Ity H-Purifier ity dia manolotra safidy hafa antsika amin'ny vidiny tsy dia lafo loatra, izay tsy nitsitsy tamin'ny fanampin-javatra toy ny hamandoana, ny sensor na ny dispenser ny essences, fa amin'ny antsipiriany sasany dia mijanona ho dingana iray ambanin'ny mpanadio avo lenta toa an'i Dyson na Philips. Na izany aza, malaza ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny ary manome antsika fahaiza-manao bebe kokoa aza izy io. Ny zavatra ratsy indrindra amin'ny zavatra niainantsika dia ny fampiharana, farafaharatsiny ao amin'ny kinikany ho an'ny iOS. Azonao atao ny mahazo ny H-Purifier 700 amin'ny 479 euro amin'ny Amazon.
Navoaka tamin'ny: 5 junio 2021
Fanovana farany: May 27 amin'ny 2021
Fifandraisana sy fampiharana
Maro be ny sensor
Tariby fohy somary fohy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Hoover H-Purifier 700, famerenana ity fanadiovan-drivotra lehibe ity